Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Hepatitis C viral load စီပိုး ဗိုင်ရယ် လုဒ်
Viral Load မရှိတော့တဲ့လူတွေဆီမှသွေးနဲ့ထိရင် ကူးနိုင်ပါသလား။ Hepatitis C viral load ကို ဒီအတွက်သုံးပါတယ်။ 1. Diagnose hepatitis C စီပိုးရှိနေတာသေချာအောင်၊ 2. Predict the chances ofasuccessful hepatitis C treatment စီပိုးဆေးပေးရင် ရနိုင်တဲ့ အောင်မြင်မှု အလားအလာ၊ 3. See how well treatment for hepatitis C is working ဆေးကုသမှုရဲ့ သက်ရောက်မှု။ ဒါပေမဲ့ ကူးစက်မှု ဆိုးနေ-မနေကို မသိနိုင်ပါ။ ရောဂါ ဆိုး-မဆိုး မသိနိုင်ပါ။ Hepatitis C viral load number ဂဏန်းတွေကို တိတိကျကျသိရတာထက် များလာတယ်၊ နည်းလာတယ်ဆိုတဲ့ နှိုင်းယှဉ်ချက်ကသာ အရေးပါတယ်။ Hepatitis C viral load is approximately 1 million IU/mL (2 million RNA copies/mL) အမှတ်နဲ့ ပြောနိုင်တယ်။ Chronic hepatitis C စီပိုးကြောင့် နာတာရှည် အသဲရောင်နေသူတွေမှာ အများအားဖြင့် 100,000 နဲ့ 10,000,000 RNA copies/mL ကြားမှာရှိနေမယ်။ တနည်းအားဖြင့် 50,000 to5million IU/mL ဖြစ်တယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ